सुत्दा मोटो सिरानी प्रयोग गर्ने कि पातलो ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ८ बैशाख २०७६, आईतवार १२:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौ । आम मानिसहरुको जिज्ञासाको विषय, सुत्दा मोटो सिरानी प्रयोग गर्ने कि पातलो ?यो कुरा तपाईको सुताईको पोजिसन र शरिरको संरचना अनुसार फरक हुन्छ । तर कतिपय डाक्टरहरुले पातलो सिरानी प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । यसै विषयमा हामीले क्रोनिक ब्याक पेन एक्सपर्ट डा. सुनिल पौडेलसँग कस्तो सिरानी प्रयोग गर्ने भनेर प्रश्न सोधेका छौ । हेर्नुस के भन्नुहुन्छ ?
उहाँका अनुसार रातभरि ७ देखि १० घन्टा एउटै पोजिसनमा सिरानीको अवस्था नमिलाई सुत्दा गर्धनलाई असर पुग्छ । त्यसपछि मासु तथा नसा तर्कने, झस्का पस्ने, गर्धन अररो हुने समस्याहरु देखा पर्दछ । त्यसका साथै हड्डी खिइने तथा नसा च्यापिने सम्भावना हुन्छ । हामी एकैछिन् एउटा पोजिसनमा मोबाइल ,ल्यापटप चलाउदा त अप्ठेरो हुन्छ भने ७ देखि १० घण्टा एउटै पोजिसनमा सिरानी नमिलाई सुत्दा के हुन्छ । त्यसैले ,विचार गर्नुस् ,सामान्य समस्याले दीर्घ रोग लागेर जीवनभर पछुताउनु नपरोस् ।
त्यसोभए सुत्दा मोटो सिरानी प्रयोग गर्ने कि पातलो ?
सिरानी पातलो प्रयोग गर्ने कि मोटो भन्ने विषयमा सबैको आ आफ्नो धारणा रहेको छ । तर पहिलो कुरा मानिसहरुको सुताईमा भर पर्छ । यदि मानिसहरु कोल्टे परेर सुतेर पातलो सिरानी प्रयोग गर्दा गर्धनको हड्डी खिइने, नसा च्यापिने र गर्धन बांगिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो सुताई अनुसारको बाक्लो र पातलो सिरानी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको पहिला विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिने नै हो । त्यसपछि डाक्टरलाई आफु सुत्ने पोजिसनबारे भन्नुपर्छ । उहाँले तपाईंको शरिरको संरचना, सुत्ने पोजिशन हेरेर सही सल्लाह दिनुहुनेछ ।
यदि डाक्टरलाई भेट्न सम्भव छैन् भने कोल्टो परेर सुत्नेले बाक्लो कपासको सिरानी प्रयोग गर्नुपर्छ । र उत्तानो परेर सुत्नेले पातलो फाइबरको सिरानी प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
के बजारमा पाइने सिरानी हाम्रो लागी फाइदाजनक हुन्छ ?
बजारमा पाइने सबै सिरानी तपाईको उपयुक्त हुदैन् । त्यसैले आफनो सुताईको पोजिसन अनुसारको फाइबरको सिरानी प्रयोग गनुपर्छ । विचार गर्नुस् गर्धनको बिरामी भएकाहरुले डाक्टरको सल्लाह विना कुनै पनि खालको सिरानीको प्रयोग गर्नु हुदैन् ।
काभ्रे । अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा काभ्रेको पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकहरू बढेका छन् । काभ्रेको धुलिखेल र नगरकोट…
विवादै विवादको घेरामा सशस्त्रका आइजीपी, सेना र प्रहरीको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र 22 views
व्यापारीलाई धम्की दिँदै रकम असुल्ने लामा पक्राउ 10 views